> Resource > iPod > Sida loo saar Music on iPod aan tirtiro Wax
Waxaan doonayaa in aan ku daro songs geli iPod ka computer ka duwan, laakiin mar kasta oo aan isku dayo inaan ku daro ka computer ka duwan waxa ay doonayaan in ay tirtirto aan music. Waan ogahay ma jiro hab ay suurtagal tahay in ay ku daraan music aan tirtiro laakiin aan helin sida. Fadlan caawi.
Waa hagaag, in ay run tahay. Waa macquul in ay ku riday music on iPod la xafidaada heeso hore. Laakiin, waxaad u baahan tahay xoogaa gargaar ah. Halkan waa fiican iPod music kala iibsiga qalab - Wondershare TunesGo (Windows). Sida user Mac ah, fadlan ka Wondershare TunesGo (Mac) . Iyada oo ay taasi iPod qalab music kala iibsiga, aad u awoodo inuu geliyo music maktabadda Lugood iyo computer ay si aad iPod muuqan. Intaa waxaa dheer, waxaa wax ay heesaha oo ku daray hore falaa. Taasi micnaheedu waa in, gabayadii hore marnaba laga tirtirayaa marka aad ku darto heeso cusub oo aad iPod.
Download this iPod music kala iibsiga qalab ku gartaan si loo dar music on iPod.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad iPod iyo macruufka hor inta aadan isticmaalin tan iPod qalab music kala iibsiga.
Sida loo dhigay music on iPod
Dooro version saxda ah ee this iPod qalab music kala iibsiga. Ku rakib oo aan bilowno on your computer Windows ama Mac. In this article, waxaana dooneynaa in ay isku dayaan gelinaya music aad iPod la version Windows ah.
Kadib markii ay taasi iPod qalab music kala iibsiga, aad arki doonaa daaqadan shaashadda kombuyuutarka aad.
Tallaabada 1. Isku day xira iPod in kombiyuutarka la cable USB ah
Ka hor inta ku daray in ay music iPod, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod, sida iPod xiriiri 5, si ay u kombiyuutarka. Ka dib markii in, aad iPod muuqan doonaan suuqa kala ugu weyn.
Tallaabada 2. Ku dar music in iPod
Tani iPod qalab music kala iibsiga ku siinayaa awood u leeyahay inuu ku daray files music ama playlists maktabadda Lugood iyo computer si aad iPod.
Si aad u dhigay music on iPod aan Lugood, waxaad riixi kartaa "Media" galeeysid bidix. On bar ugu sareeya ee ay leeg- saxda ah, doortaan "Music". Markaas, guji "Add". Daaqadda file browser, caleenta your computer si aad u hesho files music doonayo aad. Iyaga Add to your iPod. Si aad ku dari folder music, waxaad riixi kartaa saddexagalka "Add"> "Add Folder" hoos.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo (Mac) ma taageeri ku daray music ama playlists ka Lugood in iPod.
Halkii ku daray files music, waxaad awood u playlists gelinaya ka Lugood iyo kombiyuutarka aad iPod. Tiirka bidix, guji "playlist" si ay u muujiyaan suuqa kala playlist on Murayaad saxda ah. Riix saddexagalka "Add" hoos. Laba doorasho muujiyaan ilaa in liiska la jiido-hoos. Waxa ay "Add Lugood playlist" iyo "Add playlist ka computer".
Haddii aad go'aansato inaad ku darto music in iPod aan Lugood, waxaad dooran kartaa "Add playlist ka computer". Dul playlist in aad jeceshahay in aad ku darto oo ku dar.
Haddii aad qabto playlists badan oo jecel caadiga ah iyo smart maktabadda Lugood, waa in aad dooro "Add Lugood Library". Daaqadda pop-up ka, oo dhan playlists Lugood waxaa lagu muujiyey. Sax Kaliya off playlists aad doonayay. Guji "OK" in ay ku riday playlists ku saabsan iPod.
Waa intaas. Music ayaa intaa ku daray in ay aad iPod. Ka sokow, gabayadii jir ah ayaa weli waxaa jira, sow kuma? Iyadoo TunesGo, marna ma u baahan tahay inaad ka welwelina khasaaro music inta lagu jiro muusikada wareejinta.
Isku day TunesGo ay bartaan sida loo dhigay music on iPod ah.